Hevitra MPANOHARIANA | Janoary 2021
2021-01-29 @ 20:53 in Ankapobeny
Satria tia mamoaka zavatra tsy fahita mahazatra ny Malagasy dia voky an'izay indray ny olona teto Antananarivo sy ny manodidina omaly sy ny androany.
Omaly: hody niaraka tamin'ny zanaka iray, tratran'ny tsitapitapin'orana izahay teny an-dalana, tokony ho tamin'ny efatra ora sy sasany hariva tany ho any. Gaga izahay mianaka sady nihomehy satria mitaratra ny masoandro ary manga sy mipentina fotsy maivana dia maivana ny lanitra itataovanay. Lavidavitra ihany tsy tokony hahatratra anay ny rahona mainty sy mavesatra. Teo aho dia efa nilaza tamiko ihany hoe hosoratako ity tranga ity na dia ho ahy ihany aza satria sarotra inoana ilay zava-niainana.
(Sary indrana nalaina tao amin'ny Facebook)
Androany: Gaga ny maro nahita ilay rahona toa mazava dia mazava tao atsimon'Antananarivo tao ary nandefa ny sary tao amin'ny tambajotran-tserasera. Nisinisy ireo nahita, ny fijery azy dia tambonin'ny rahona mainty sy mavesatra no nahitana io rahona izay misy milaza fa avana rava io. Izany hoe zavatra mety hitranga fa ny olona no mandika azy amin'izay tiany andraisany azy.
Fa tantara iray mila raketina ihany koa ny fijalian'ny olona ara-drano teto amin'ny kaominina Anosy Avaratra sy Sabotsy Namehana (Mariho fa faritra maromaro eto amin'ny firenena no makiana rano sy tsy tafidi-drano ny tanimbary). Na dia avy matetika aza ny orana tao an-drenivohitra dia toa voadingana hatrany ireo kaominina roa ireo. Efa nitaraindraina ny olona ary ny manahirana dia ny mpanao biriky no anisan'ny tena mahazo tsiny.
Dia lasa ny sain'ny olona teto amin'ny fokontany misy ahy hoe tsy mbola nisy olona niompy osy mihitsy teto ka sao izany no tsy mety ilatsahan'ny orana teto? Nanaovan'ny olona fanangona-tsonia ireo mpiompy osy tamin'ny fokontany anankiroa (Kaominina Anosy Avaratra sy Kaominina Ambohimanga roa) ireo hanaisotra ireo biby fiompiny ireo. Dia voaisotra tokoa ireo biby ireo. Vao maika mety hanome vahana ny finoan'ny olona ny filatsahan'ny oram-baventy taorian'izany, ary dia nikoriana amin'izay ny rano amin'ireo lehandrano mahazatra ety amin'ny manodidina. Tsy haiko indray ny herin'ny vavaka nataon'ny Mpitandrina teto an-toerana hatrany amin'ny hilatsahan'ny orana. Dia izay indray aloha.
29 janoary 2021